Somalia : Guddoomiyihii Shabeelaha Dhexe oo ka hadlay dagaaladii Cadale ka dhacay
Home Somali News South and Central Somalia : Guddoomiyihii Shabeelaha Dhexe oo ka hadlay dagaaladii Cadale ka dhacay
Xili maalmihii danbe ay jireen dagaalo dhex marayay beelo walaalo ah oo wada dagan gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxaa arintaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeelada dhexe Cabdi Jiinoow Calasow waxa uuna ku tilmaamay gudoomiyaha in la dayacay heshiisinta beelahaasi walaalaha ah.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in loo baahna in la dar-dar galiyo heshiisintooda si loo joojiyo colaada uu dhiig ku daadanayo.
Gudoomiye Jiinow ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamo la kala dhex dhigay beelahaasi, oo haatan uu hakaday dagaalkii u dhexeeyay maleeshiyo beeleedka.
Dhinaca kale gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in maamulka Hirshabelle looga baahan yahay in uu mas’uuliyadd iska saaro sidii loo soo afjari lahaa colaadaasi.
Loona heshiisiin lahaa beelaha ku dagaalamayo gobolka Shabeelada Dhexe, si taa lamid ahna dowladda Soomaaliya ay kaalin muuqato ka qaadato fududeynta heshiiska la dhex dhigayo beelahaasi.
Gobolka Shabeelada Dhexe ayaa maalmihii danbe waxaa ka dhacayay dagaal beeleedyo u dhexeeyay beelo walaalo ah oo wada daga gobolka Shabeelada Dhexe, inkastoo xaalada ay haatan dagan tahay oo uusan jirin wax dagaal ah.